IPL 2020 : पर्पल क्याप जित्न सक्ने ५ बलर – WicketNepal
Sakar Sedhain, २०७७ भाद्र १३, शनिबार १२:३०
टि-२० फर्म्याटको खेलमा बलरहरुको प्रदर्शन निकै महत्वपूर्ण रहने गर्छ। बलरहरुले शानदार प्रदर्शन गर्ने टोलिहरुनै प्रतियोगितामा राम्रो नतिजा निकाल्न सफल रहेको लिगको इतिहासले प्रस्ट पार्छ। इन्डियन प्रिमियर लिगको १२ सिजन मध्ये ११ सिजनमा पर्पल क्याप जित्ने खेलाडी रहेको टिमले प्रत्येक पटक अन्तिम ४ मा स्थान बनाउन सफल भएको छ। आईपीएलमा सर्वाधिक विकेट लिने बलरलाई पर्पल क्याप दिने गरिन्छ। १३ औं संस्करणको आईपिएल नजिकिदै गर्दा यो सिजन पर्पल क्याप जित्ने सम्भावना भएका बलरहरुको सूची यस लेखमा प्रस्तुत गरेका छौँ –
१. जस्प्रित बुम्राह ( मुम्बई इन्डियन्स )
जस्प्रित बुम्राह आईपिएलको स्टेजले खोजेको एक प्रतिभाशाली तिव्र गतिका बलर हुन्। भारतीय क्रिकेट टिमका कप्तान विराट कोहलीलाई आईपिएलमा पहिलो सिकार बनाएका बुम्राह हाल भारतिय टिमको पहिलो रोजाईका बलर हुन्।
१९ वर्षको कलिलो उमेरमा बैंगलोर बिरुद्ध डेब्यु गरेका बुम्राहले २०१३ यता आईपिएलमा मुम्बई इन्डियन्सको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन्। उनी २०१६ को सिजनबाट सर्वाधिक चर्चामा आएका थिए जब उनले १४ खेलमा १५ विकेट हात पार्दै लिगमा छाप छोड्न सफल भएका थिए। सोहि प्रदर्शनको मद्धतले राष्ट्रिय टिममा स्थान बनाउन सफल भएका थिए। त्यसपश्चात बुम्राहले करिअरमा पछि फर्केर हेर्नु परेको छैन।
बुम्राह २०१७ सिजनमा २० विकेट लिदैं सर्वाधिक विकेट कर्ताको सुचीमा तेस्रो स्थानमा रहेका थिए। उनले लिगकै दोश्रो सर्वाधिक ( १२२ ) डट बल गर्दै मुम्बईलाई त्यो सिजन उपाधी जिताउन अहम् भूमिका निर्वाह गरेका थिए। उनले गत वर्षको आइपिएलमा १९ विकेट लिएका थिए र सर्वाधिक विकेटकर्ताको सुचीमा पाँचौ स्थानमा थिए।
हालसम्म पर्पल क्याप जित्न चुके पनि टिमको लागि भने सधै उल्लेखनीय प्रदर्शन गर्ने गर्छन्। उनी जस्तोसुकै परिस्थितिबाट पनि टिमलाई जितसम्म डोर्‍याउन सक्छन्। उनी हाल विश्वक्रिकेटकै एक उत्कृष्ट डेथ बलर हुन्।
उनको अद्वितीय योर्कर गर्ने खुबी र १४० को गतिमा बाउन्सर तथा गुड लेन्थमा बलिंग गर्न सक्ने कारण उनी पछिल्लो समय सफल भएका छन्। यो पटक युएईमा आईपीएल हुनाले त्यहाँको पिचले समेत उनलाई साथ दिनेछ। युएईको पिचमा बल तल बस्ने गर्छ र त्यस्तोमा उनी बिपक्षीको लागि झनै घातक सावित हुन सक्छन्।
कोभिड-१९ को महामारीको कारण तिव्र गतिका बलरहरुलाई आराम गर्न आवश्यक समय मिलेको छ। उनले यो सिजन पहिको पटक पर्पल क्याप हात पार्ने लक्षले युएई प्रस्थान गरेका छन्।
२. युजभेन्द्र चाहाल ( रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोर )
२०१३ मा मुम्बई इन्डियन्सले आईपीएल उपाधी जित्दा चाहाल पनि टिमको एक सदस्य थिए। तर त्यसबेला उनलाई कमैले चिन्थे। उनले आफुलाई चिनाउने अवसर पनि कमै पाएका थिए। २०१४ मा विराट कोहलीको कप्तानीमा रहेको रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोर (आरसिबी) मा आबद्ध भपछी उनको करिअरले नयाँ उचाइ लियो।
लेग स्पिनर चाहालले आरसीबिको लागि पहिलो सिजन २०१४ मा १२ विकेट तथा २०१५ मा २३ विकेट हात पारे। पछिल्लो समय भारतीय टिमको महत्वपूर्ण सदस्य रहँदै आएका चाहालले आईपीएल २०१६ मा १३ खेलमा २१ विकेट हात पारेका थिए। त्यस सिजन उनी र पर्पल क्यापबिच भुवनेश्वर कुमार बाधक बनेका थिए। कुमारले १७ खेलमा सर्वाधिक २३ विकेट लिएका थिए।
आरसिबिले हालसम्म आईपीएल उपाधी जित्न असफल रहेता पनि चाहालको शानदार बलिगंमा दुई पटक आइपिएलको प्ले अफमा पुग्न सफल भएको छ। आईपीएलमा १०० भन्दा कम खेल खेलेर १०० विकेट हात पार्ने दोस्रो खेलाडी चाहालले आरसिबीको कमजोर बलिङ आक्रमणको तकडा बलरको रुपमा आफुलाई उभ्याएका छन्।
चाहाल बीचको ओभरहरुमा किफायती बलिङ गर्दै साझेदारी तोड्ने काम गर्छन्। उनिसँग थुप्रै बलिंग भेरिएसनहरु छन्। उनी ब्याट्सम्यानलाई ठूलो शट खेल्न लोभ्याएर आफ्नो जालमा पार्ने गर्छन्।
आइपिएलको पिचमा स्पिनरले राम्रो टन पाउने अनुमान गरिएको छ त्यसैले पनि चाहाल ब्याट्सम्यानका लागि खतरा बन्न सक्छन्।
आफ्नो बलिङ सुधार गर्न केही नयाँ अनुहारलाई टिममा भित्र्याएको आरसिबिले चाहालको शानदार बलिङ प्रदर्शनको मद्दतले आफ्नो पहिलो आइपिएल उपाधी हात पार्ने सोचमा रहेन छ।
३. राशिद खान ( सनराइजर्स हैदराबाद )
अफगानी लेग स्पिनर राशीद खान पछिल्लो समय टि-२० क्रिकेटमा सर्वोत्कृष्ट खेलाडी मध्ये गनिने गर्छन्।
२०१७ मा पहिलो पटक आइपिएल खेल्न छनोट भएका राशिदले सुरुवाती सिजनमै आफ्नो छाप छाड्न सफल भएका थिए। हैदराबादलाई २०१७ यता प्रत्येक पटक आईपिएलको प्ले-अफमा पुर्याउन उनको अहम योगदान रहेको छ।
२०१८ मा राशिदले २१ विकेट हात पार्दै आफुलाई उत्कृस्ट सावित गरेका गर्दै सर्वाधिक विकेटकर्ताको सुचीमा दोस्रो स्थानमा रहन सफल भएका थिए। उनको प्रदर्शनको प्रेरणाले हैदराबाद त्यस सिजनको उप-विजेता बन्न सफल भएको थियो।
राशिद आईपीएल इतिहासकै सबैभन्दा किफायती बलर समेत हुन्। उनले कुल ४६ खेलमा १८२ ओभर बलिंग गर्दा १,१९३ रन खर्चदै ५५ विकेट लिएका छन् जुन क्रममा ६.५५ प्रतिओभर रन खर्चेका छन्।
तेज गतिमा उनले फाल्ने गुग्ली विश्वका धुरन्धर ब्याट्सम्यानलाई बुझ्न कठिन हुने गर्छ।
उनले गत सिजन १४ खेलमा १८ विकेट लिएका थिए। खान पछिल्लो ३ सिजनबाट पर्पल क्याप हात पार्न थोरैले चुकेका छन्। तर, यो सिजन भने युएईको स्पिन मद्दत गर्ने पिचना कुनै हालतमा नचुकी पहिलो पटक पर्पल क्याप हात पार्ने सोचमा हुनेछन्।
४. भुवनेश्वर कुमार ( सनराइजर्स हैदरावाद )
धारिलो स्विंग बलिंगको मद्दतले आईपीएलमा उत्कृस्ट बलिंग गर्दै आएका भुवनेश्वर कुमार लिग इतिहासकै छैठौं सर्वाधिक विकेट लिने बलर हुन्। २०११ मा लिगमा डेब्यु गरेका उनले ११७ खेलमा १३३ विकेट लिईसकेका छन्।
भारतको सेतो बल क्रिकेटमा पहिलो रोजाईका बलर कुमार सन् २००९ र २० को दुइ सिजन बैंगलोर टिममा थिए तर डेब्यु भने गर्ने मौका पाएनन्। त्यसपछि २०१२ मा उनले पुनेको लागि खेल्दै उनले ११ खेलमा ८ विकेट लिए। जसपछि उनलाई भारतीय राष्ट्रिय टिममा समेत लिईएको थियो।
भुवनेश्वरको बलिंगमा गति धेरै नभएता पनि उनि जस्तोसुकै परिस्थितिमा निरन्तर अनुशाशित लाइन-लेन्थमा बलिंग गर्न सक्छन्। त्यसैले उनि आईपीएल इतिहासमै २ पटक पर्पल क्याप जित्ने पहिलो र लगातार २ वटा पर्पल क्याप जित्ने एक मात्र खेलाडी हुन्। २०१६ मा कुमारको शानदार प्रदर्शनको बलमा हैदरावादले लिगको उपाधि जितेको थियो।
भुवनेश्वर लाइन र लेन्थमा बलिंग गर्ने बलर मात्रै हैनन् उनि खेलको पावरप्ले र डेथ ओभरमा समेत राम्रो बलिंग गर्न सक्छन्। उनि विकेटको दुवैतर्फ स्विंग गर्न सक्छन् भने स्लो-बाउन्सर, नकल बल, अफ कतार तथा घातक योर्कर समेत गर्न सक्छन्। खेलमा विकेट नलिए पनि कुमार रन दिन भने कन्जुस्याइँ गर्ने गर्छन्।
भुवनेश्वरले आईपीएलमा २३.७१ को एभरेज र १९.६३ को स्ट्राइक रेटले बलिंग गरेका छन् जुन् आईपीएलमा ९० भन्दा धेरै खेल खेलेका बलरहरु मध्ये तेश्रो उत्कृस्ट हो।
लिगको अघिल्लो २ सिजनमा भने कुमारले २७ खेलमा २२ विकेट लिएका छन् जुन प्रदर्शन उनको स्तरको हैन। गत वर्ष वानडे विश्वकपमा उनले ६ खेलमा १० विकेट लिएका थिए।
आईपीएल अप्रिलबाट सेप्टेम्बरमा सर्दा कुमारले आफ्नो बलिंगमा अझ मेहनत गर्न पाएका छन्। १३ औं सिजनको आईपीएलमा उनको लक्ष्य शानदार पुनरागमन गर्दै तेश्रो पर्पल क्याप जित्दै नयाँ रेकर्ड बनाउने हुनेछ।
५. कुलदिप यादव ( कोलकाता नाइट राइडर्स )
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा कुलदिप यादव र युजभेन्द्र चाहलको जोडीलाई ‘कुल्चा’ नामले चिनिने गर्छ। त्यस मध्ये लेग बायाँ हाते चाइनाम्यान बलर कुलदिपको आईपीएलमा राम्रो अनुभव रहेको छ। २५ वर्षीय यादव कोलकाताको बलिंग आक्रमणको प्रमुख हतियार हुन् जोसंग विकेट निकाल्ने क्षमता भरपुर छ।
२०१६ मा लिगमा डेब्यु गरेका यादव २०१७ मा नियमित खेलाडी भएका थिए जुन सिजन उनले १२ विकेट लिए। सो प्रदर्शन पछि उनले भारतीय टिममा समेत प्रवेश पाए। उनको उत्कृस्ट आईपीएल सिजन २०१८ मा थियो जुन सिजन उनले १७ विकेट लिंदै टिमलाई प्ले-अफ पुर्याउन महत्वपूर्ण योगदान दिए।
बललाई ब्याट्सम्यानको नजिक फाल्न रुचाउने यादव रन रोक्ने भन्दा बढी विकेट निकाल्ने र साझेदारी तोड्ने बलर हुन्। ब्याट्सम्यानलाई ठुलो सट खेल्न लोभ्याएर विकेट निकाल्न उनि थोरै बढी रन दिन हिच्किचाउने गर्दैनन्।
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा २ वटा ह्याट्रिक लिने एक मात्र भारतीय बलर यादव सुरुवाती भन्दा पनि मध्यम ओभरमा कसिलो बलिंग गर्ने गर्छन्। सोहि दवावले ब्याट्सम्यानले विकेट दिने गर्छन्।
लिगको गत सिजन ९ खेलमा मात्र ४ विकेट लिएका कुलदिपले ७१.५ को खराब औशतमा बलिंग गरेका थिए। यो सिजन त्यो प्रदर्शन भुलाउने धुनमा यादव रहनेछन्। युएईको स्पिन मद्दत गर्ने पिचले पनि यो पटक यादवलाई साथ दिनेछ जहाँ उनि धेरै विकेट लिंदै पर्पल क्याप जित्न सक्छन्।
( स्पोर्ट्सकिडाबाट अनुवाद गरिएको )